ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဆွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Daniel Patrick Chugg နှင့် အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ ‹ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဆွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Daniel Patrick Chugg နှင့် အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် ၃ ရက်
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Daniel Patrick Chugg နှင့် အဖွဲ့အား ယနေ့နေ့လည် ၁၄၀၀ နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ အဆိုပါဝန်ကြီးဌာန ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမတွင်လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နှင့်အတူ အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမျိုးအောင်၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးအေးလွင် နှင့် တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာဟူ၍ အပိုင်း၂ ပိုင်း ဖြင့်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိရာ အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာကဏ္ဍတွင် အဓိကအားဖြင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပိုမိုရရှိစေရေးနှင့်ပြည်ပရောက် အလုပ်သမားများအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရေးတို့ဖြစ်ပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများတွင် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများသည် အမျိုးသမီးများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပိုမိုရရှိစေနိုင်ရေးနှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များ နှင့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ရေးတိုက်တွန်းဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါကြောင်း၊ ပြည်ပရောက်မြန်မာအလုပ်သမားများအရေးဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ ပြည်တွင်းရှိလုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု အဆင့်မြှင့်တင်ရေးဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်၍ လည်းကောင်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေး ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအနေဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားသည့် သူများအား ပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် UNHCR UNDP အဖွဲ့အစည်းများနှင့်သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့်အခြေအနေများ၊ မကြာမီကာလအတွင်း ဘူးသီတောင် မောင်တောဒေသရှိ ကျေးရွာများ၌ လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်မည့် အစီအစဉ်များ၊ ပြန်လည်လက်ခံရေးဆောင်ရွက်ထားရှိသည့်ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပြည်နယ်အဆင့် မြို့နယ်အဆင့်များ၏ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်ပြည်လုံးကျွတ်သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူခဲ့သည့်အခြေအနေများ၊ မကြာမီ နှစ်လည်သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမည့်အခြေအနေများ၊ လူမျိုးစုစာရင်းများထုတ်ပြန်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။